शाहरुखलाई रणवीर सिंहले दिए यस्तो झड्का ! – Everest Dainik – News from Nepal
शाहरुखलाई रणवीर सिंहले दिए यस्तो झड्का !
काठमाडौँ, पुस १४ । बलिउडका किङ्ग खान अर्थात् शाहरुख खानलाई ठुलो झड्का लागेको छ । यो झड्का उनले साह्रै अपेक्षा गरेको गत हप्ता मात्र रिलिज भएको फिल्म जीरोले दिएको हो । दुई सय करोडको लगानीको जीरोको भारतीय बक्स अफिसको कमाइले लगानी नउठ्ने देहिएको छ ।
पहिलो दिनमा २०.१४ करोड कमाएको यस चलचित्रको कमाइ एक हप्ता पछि आएर १ करोडमा झरेको छ । कमाइमा ९५ प्रतिशतले गिरावट आएपछि शाहरुखको महत्वाकांक्षी फिल्म फ्लप हुनु निश्चित भइसकेको छ ।
उता शाहरुखको जीरोलाई रणवीर सिंह अभिनीत फिल्म सिम्बाले साँच्चिकै जीरो साबित गरिदिएको छ । शुक्रवार रिलिज भएको उक्त फिल्मले पहिलो दिनमै २०.७२ करोड कमाइ गरेको छ । यो उक्त फिल्मका लागि अपेक्षा गरिए भन्दा बढी हो । पद्मावतको पहिलो दिनको कमाईलाई पछि पर्दै रणवीरको क्यारियरकै सर्वाधिक कमाउने फिल्म सिम्बाले जीरोलाई मंचबाट बाहिर गरिदिएको छ ।
शाहरुखको जीरोलाई एउटा क्षेत्रीय फिल्म केजिएफ च्याप्टर वानले समेत दोस्रो शुक्रवारसम्म आउँदा पछारेको छ । हिन्दी डब भर्सनमा पहिलो दिन २.१० करोड कमाएको यस फिल्मको छैठौं दिनको कमाइ सुरुको दिनभन्दा बढी अर्थात् २.९० करोड कमाएको थियो ।
यस फिल्मले दोस्रो शुक्रवार पनि १.२५ करोड कमाएको छ जब कि यस फिल्मको हिन्दी संस्करणका लागि आठ सय मुनि स्क्रीन मात्रै उपलब्ध रहका छन् ।
लगातारको खस्किँदो प्रदर्शनले शाहरुखको स्टारडम बिस्तारै खस्केको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
ट्याग्स: Simmba, Zero
पूर्वयुवराज पारसले सोनिकालाई हार उपहार दिएपछि…
चलचित्र परदेशी २ मा प्रकाश सपुत हिरो, भने– सपना पूरा भयो !